Ukuphupha ngobunqunu Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Phakathi kwezinye izinto, ubuze buhlobene ngokusondeleyo nobomi bomntu ngokwesondo, kuba ngandlela yimbi kunyanzelekile ukuba enze isenzo sesondo. Kwangelo xesha, ukuhamba ze kukwathetha inkululeko, ukukhanya kunye nokungabi nazintloni kubantu abaninzi: bayakonwabela ukuphepha imigaqo ethile kwaye bakwazi ukuhamba ngokukhululekileyo ngaphandle kwempahla. Iimodeli ze-ze zihamba ngaphandle kweengubo phambi kwekhamera kwaye zivelise umzimba ohamba ze kukukhanya okufanelekileyo kobuhle; Kwi-sauna ubile ze, emva koko usebenzise itawuli okanye ibhafu yokunxiba ukwenza into elungileyo emzimbeni wakho.
Nangona kunjalo, ubunqunu abungabo bonke abantu: isinxibo sinokubangela iimvakalelo zentloni kunye nokungonwabi, imvakalelo yokuvezwa nokuba sesichengeni. Oku kunjalo ngakumbi xa umntu ekuthethwa ngaye ekwindawo engaqhelekanga, eziva ebonwa, okanye kunjalo xa eme ngengozi kwimpahla ka-Adams.
Ubunqunu bunokudlala indima ebalulekileyo emaphupheni. Abantu abaninzi baphupha beze. Oku kunokuviwa ngokuchanekileyo nangokubi apha. Imvakalelo yephupha malunga nobuze bakho ixhomekeke, kubomi bokwenyani, kumlinganiswa wakho. Ukuhlamba umntu kunye nako kunokunxulumana noku. Kodwa uchazwa njani ngokuchanekileyo "ubuze / ubunqunu"?
1 Uphawu lwephupha «ubunqunu»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ngasentla, kutheni? Ukutolikwa kwamaphupha
2 Uphawu lwephupha «ubuze» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ubunqunu» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ubuze» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ubunqunu»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ngasentla, kutheni? Ukutolikwa kwamaphupha
Ukuba umntu obhinqileyo uziva kamnandi xa ehamba enganxibanga kwaye mhlawumbi kuphela ibhulukhwe yangaphantsi kwilizwe lakhe lamaphupha, imeko yephupha ibonisa ukuba angathanda ukuhlala ngokukhululekileyo nangokukhululekileyo xa evukile. Oko akuthethi ukuba abaphuphi bangathanda ukubaleka nasezitratweni ngaphandle kwebra kunye nehembe. Kodwa unokuziva unyanzelekile ukuba uhlangabezane nokulindelweyo kwabanye. Umntu ophuphayo angathanda ukubaleka kwaye azibonise rhoqo njengoko enjalo.
Ukuba endaweni yoko iphupha eli lihlazo kwaye iphupha lingathanda ukunxiba iimpahla, uhlala uziva uphantsi ngokwenyani.
Uphawu lwephupha «ubuze» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, nabani na ophupha "ngeenyaniso ze" kwaye angaziva engonwabanga unenye. i-nostalgia kamva, ukuze azibonakalise njengoko enjalo Iphupha ngokwenene liyazithemba, kodwa kunokwenzeka ukuba ube nemvakalelo kubomi bokwenyani ongenako ukuyiphuhlisa ngokukhululekileyo kwaye awunakuphila ngokupheleleyo isimilo sakho sokwenyani.
Ngokukodwa, ukuba umntu ekuthethwa ngaye ubonwa ehamba ze esidlangalaleni ngabantu abaninzi ephupheni, unomdla omkhulu kwi el mundo Ukusukela kumlindo wokubonisa ngokucacileyo iinkalo ezithile zomlinganiswa wakhe kwaye akwazi ukuveza uluvo lwakhe ngokuzimeleyo. Yenza oku kungoneliseki ngokuhamba ze komzimba ephupheni.
Kwangelo xesha, amaphupha olusu angenanto anokuba ngumqondiso wokuba i-subconscious iyinyani. Okuvulekileyo ngakumbi y nya niseka ukuziphatha. Ukuphupha akufuneki kufihle iimvakalelo zakho zokwenyani kunye neenjongo zakho ngasemva kwe-facade, kodwa kufuneka zivulelekile kubo.
Nangona kunjalo, ukuba uphupha ngokujonga ze kwi-strip show, unokuba unayo Yintlunguungaqondwa kakuhle. Unoloyiko lokuba abantu abamngqongileyo abayi kwamkela okanye baqonde isimilo esithile.
Ubunqunu baphupha apho lo mntu kuthethwa ngaye engaziva engonwabanga kwaye ezama ukufihla amalungu akhe obuni, umzekelo emva kwegqabi lekhiwane, nawo ahlala esiya. Oku kubonisa uloyiko lokuvezwa kubomi bokwenyani. Ukuphupha kulihlazo, umzekelo ngokuqinisekileyo imfuno yesondo.
Kwakhona, ukuphupha akusoloko kukuzithemba ngokwaneleyo ukuba uvuleleke kuyo yonke imimandla yobomi bakho okanye isimilo sakho kwaye woyike uluvo oluhlazisayo lomnye umntu, kuba oku kungakwenza ube sengozini kwaye kukuveze.
Nabani na ogeza ehamba ze echibini, emlanjeni okanye elwandle uziva esekhaya kwindalo kwaye unokuhlaziya iibhetri zabo apha. Kwangelo xesha, umphuphi unayo amandla kwanele ukumelana neempembelelo zangaphandle.
Uphawu lwephupha «ubunqunu» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokuka-psychoanalyst uSigmund Freud, amaphupha okuhamba ze abonisa ukulangazelela okungazi nto:
Iphupha linqwenela oko Ukukhathazeka abuyele ebuntwaneni bakhe. Abantwana abazi iintloni, nokuba nexhala, okanye isimilo. Kubo, ubunqunu buyindalo ngokupheleleyo kwaye buyazibonakalisa.
Ke nabani na ophupha ehamba ze uyayilangazelela le meko yezinto kwaye ufuna ukubanakho ukuziphatha ngokungakhethi cala nangokuzimeleyo kwakhona.
Uphawu lwephupha «ubuze» - ukutolika kokomoya
Ngokwenkcazo yomoya, uphawu lwephupha lubonisa ubunqunu. Isiqalo esitsha hin: Umntu ochaphazelekayo uba kwimeko yakhe ngokuzalwa kwakhona. umsulwa wendalo ingabuyisela. Le meko ithathwa njengezulu.